L'Echalier en Berry: ihotele efulethini eWallaby
I-L'Echalier en Berry ikwimizuzu eli-10 emantla eBourges, kwisango lezidiliya ezidumileyo zehlabathi zaseMenetou-Salon naseSancerre. Embindini wedolophana yaseFussy, indlu ephambili evela kwiNguqulelo yaseFransi idibanisa umtsalane wezakhiwo zakudala kunye nokukhululeka kwezindlu zanamhlanje. Isihlomelo esakhiwe kwi-60s, isimbo semotel yaseMelika, sikwintendelezo yangaphakathi siqinisekisa ukuba uphumle oluyimfuneko lokufunyanwa kweBerry.
Le ndlu inendawo eyi-42m2 ngokwemithamo entle ene-thermal kunye nesandi sokugquma. Ilungele isibini esinekhitshi laso elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-Gien crockery kunye ne-cookware esemgangathweni ukwenza izitya kwiimveliso zasekhaya ...
-Igumbi elinomgangatho omnye we-42 m2 kunye neendawo zokupaka zabucala
-Kulala abantu aba-2 abanebhedi ekhululekileyo kunye negumbi lokuhlambela langoku elineshawa yokuhamba, i-towel warmer (ithuba lesofa eguqukayo yabantu aba-2)
-Ifriji, iMicrowave edibeneyo kunye ne-oveni yesintu, isitovu seceramic, ihood yokukhupha, ukufudumeza, ishawari yaseTaliyane, iSmart TV, ilinen ebandakanyiweyo kunye newodrophu.
-Izilwanyana zasekhaya zamkelwe ngogcino
IFussy yindawo yobuchule bokutyelela uBerry, imizuzu eli-10 ukusuka kwiziko lembali laseBourges kunye nazo zonke iivenkile zayo. Kufuphi nezidiliya zaseSancerre kunye neMenetou-Salon kwindlela yaseJacques Coeur, eyaseCompostela kunye neegadi ezimangalisayo.